2021 Citizenship Saint Lucia
Kutora chikamu muSaint Lucia Investment Chirongwa ndiyo nzira nyowani uye yakanakisa yekutora ugari nemagwaro epamutemo (mapasipoti) muCaribbean.
Yakakwenenzverwa, inoyevedza, isingakanganwike Saint Lucia inzvimbo yakasarudzika, yakazara zviri pamutemo.
Zvinosarudzika maficha uye zvakanakira:
hapana chikonzero chekuramba urwo huripo;
hapana chikonzero chekugara;
hapana mutero nemutero wepasi rose wemari;
hapana kudikanwa kwekuvapo pachako kana uchizadza fomu rekupinda muchirongwa;
hapana zvinodiwa kubvunzurudzo, zvinodiwa zvedzidzo kana manejimendi ruzivo.
hapana chisungo chekunyorera vhiza kuti upinde munharaunda yenyika dzinopfuura 146, kusanganisira iyo nzvimbo yeSchengen, Great Britain, Hong Kong;
kuwana ugari mukati menguva isingadariki mwedzi mitatu;
kodzero yekuwana ugari hwevana vari pasi pemakore makumi maviri nemashanu;
kusanganisirwa kwevabereki vanopfuura makore makumi matanhatu nematanhatu vanogara nemunyoreri;
kunyoreswa kwehugari hwevanhu vakaremara vari mukutarisirwa kwevanhu (vana, vabereki);
nharaunda inokodzera kugara zvachose;
kuwana zvinyorwa zvepamutemo (pasipoti) Saint Lucia, mukati menguva isingadariki mwedzi mitatu.
Maitiro ekuwana ugari hweSanta Lucia:
1. Nekudyara muNational Development Fund (chimiro - kusachinjika):
$ 100 zviuru - kune mukuru anonyorera;
$ 165 zviuru - kune mukuru anonyorera pamwe newawakaroorana naye kana murume kana mukadzi
$ 190 zviuru - kune mukuru anonyorera pamwe newawakaroora kana murume kana mukadzi pamwe nevana vaviri;
$ 25 zviuru - kune mumwe nemumwe anotevera anochengetwa.
2. Nekudyara muzvivakwa
Kuti uwane ugari hwemuSaint Lucia, zvinodikanwa kutenga zvivakwa muhuwandu hwese hunosvika zviuru mazana matatu zvemadhora, chivakwa chakataurwa chinofanira kunge chiri kweanenge makore mashanu. Imba yekunyoresa mari, kunyoresa uye mutero zvinobhadharwa zvakapfuura kukosha kweimba.
3. Mari mune mari yemasangano epamutemo eSaint Lucia
Citizenship vanyoreri vanofanirwa kuisa inokwana US $ 3.5 miriyoni mukutenga, kuronga kana kutora chikamu muSanta Lucia masangano epamutemo. Vanenge vatatu vagari vemuSaint Lucia vanofanirwa kuve nechekuita mukuita kwesangano repamutemo. Kune vaviri vanyoreri, mari iyi iUC $ 3 mamirioni. Vagari vatanhatu vagari vemuSanta Lucia vanofanirwa kuve nechekuita mukuita kwesangano repamutemo.
Zvikamu zvemapurojekiti anotenderwa:
poindi yechikafu chakakosha;
chiteshi chengarava uye marina;
chiteshi chengarava, zambuko, mugwagwa nemugwagwa mukuru;
institution, chimiro chesainzi yekutsvaga hunhu;
4. Hurumende inosungwa
Vanhu vanonyorera kuve vagari vanofanirwa kuisa mari muhuwandu hwe:
500 zviuru US $ - kune mukuru anonyorera;
535 zviuru US $ - kune iye mukuru anonyorera pamwe neumwe wake;
550 zviuru US - kune mukuru anonyorera pamwe newawakaroora kana murume kana mukadzi pamwe nevana vaviri;
25 zviuru US $ - kune mumwe nemumwe munhu wekuwedzera mukutarisira.
Mari dzinosanganisirwa nekutarisa kubatanidzwa muzviitiko zvematsotsi:
7 US $ - kune mukuru anonyorera,
US $ 5 - kune vanovimba pamusoro pemakore gumi nematanhatu ekuberekwa.
- kana paine mari:
$ 2 zviuru - kune mukuru anonyorera;
$ 1 chiuru - kune mumwe wekuvimba naye.
- kana uchitenga zvivakwa.
$ 50 zviuru - kune mukuru anonyorera;
$ 35 zviuru - zvemurume kana mukadzi, vana vangangoita 18 makore;
$ 25 zviuru - zvevana vari pasi pemakore gumi nemasere.
Citizenship Saint Lucia ENG
Citizenship Saint Lucia RUS
Dzokera ku Citizenship neInvestment